Android App ရေးနည်း
အောက်ဖော်ပြပါ ကြော်ငြာသုံးခုကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်မျှ Click ပေးခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ကူညီပေးပါခင်ဗျာ
Posted by Aung Phyo Paing at 7:57 AM
PTW July 25, 2012 at 10:01 AM
Beini Software ကဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ပဲ မဒေါင်းတတ်လို့လားတော့မသိဘူး ၊ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် ဒေါင်းလို့လွယ်အောင် လုပ်ပေးပါ့လားဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PTW July 26, 2012 at 9:42 AM
Beini Software က down လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး Down လို့ရအောင်လေးလုပ်ပေးပါလားဗျာ
aung phyo paing December 11, 2013 at 2:34 PM
ဟုတ်ကဲ့...အကို Beini Software ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပီးရင်...5 second လောက်စောင့်လိုက်ပါ...ပြီးရင်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးမှာ SKIP AD ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင်တော့ Download လုပ်လို့ ရပါပြီခင်ဗျ
Bat file ရေးနည်း (4)
I-OS Solution (3)
IP Hide (3)
Network Hacking (4)
Pay Pal Hacking (2)
www.hebkor.tk. Picture Window theme. Theme images by enot-poloskun. Powered by Blogger.